Ungayithuthukisa kanjani i-Craft Beer-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Ungayikhuthaza Kanjani Ubhiya Wobuciko
Isikhathi: 2020-10-27 Amazwana: 29
Ngokomlando, ubhiya ubelokhu uhlotshaniswa kakhulu nempilo yeThe Times selokhu yazalwa.Kusukela esikhathini samanje, umhlaba ususungule isiko lobhiya elihlukile; Ngaphezu kwalokho, imibono eminingi yabathengi mayelana nobhiya iyabandlulula, kanti ubhiya empeleni unempilo futhi isiphuzo esinothando.
Ukugqamisa isiko likabhiya elithi "jabulela", ukwahlukaniswa kukabhiya akukuhle nje kuphela ukwenza ubhiya, kufanele kube phambili kakhulu, ukuxhumana ngenkuthalo nabathengi, ngendlela efana nokuthi "vula", ubhiya wolwazi lobuchwepheshe olwedluliselwe ku abathengi, izinguquko ezimakethe zokungaqondani kabhiya, ngasikhathi sinye ukwenza abenzi nokusabalalisa amasiko wokusabalalisa.ukuqabuka kukabhiya kubaluleke kakhulu. Ngaphandle kokutshela abathengi ukuthi bangayinambitha kanjani kahle ubhiya, abathengi kufanele batshelwe nokuthi ubhiya omusha oseduzane yiwona ohamba phambili.
Njengoba sonke sazi, ukuthuthuka okusheshayo kukabhiya wezandla kuveze izinkinga eziningi.Ukuze kuthuthukiswe intuthuko enempilo yobhiya wobuciko, iBeer Professional Committee yaseChina Food Industry Association ibilokhu ifuna ukusungula amazinga afanele embonini, ichaze ngokunembile umqondo we ubhiya wobuciko, futhi unikeze umkhakha wobhiya waseChina isisekelo sokusebenza ngokuya ngezinto zokusetshenziswa, ubuchwepheshe, ukunambitha nezinye izinto.
Previous: Izinsiza zokupheka ubuciko zasekhaya zizocishwa
Okulandelayo: Umbono WamaHops